Wasiirka Xanaannada Xoolaha Soomaaliya oo soo xiray shirka horumarinta Xoolaha “SAWIRRO” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiirka Xanaannada Xoolaha Soomaaliya oo soo xiray shirka horumarinta Xoolaha “SAWIRRO”
By aaheybe / June 19, 2019 June 19, 2019
Muqdisho (SONNA):-Shirkan oo socday muddo seddex cisho ah ayey ka qeyb galayaashu isku weedaarsadeen fikrado iyo doodo ku saabsan qaabka ugu wanaagsan ee lagu horumarin karo xoolaha oo ka mid ah ilaha dhaqaale ee dalkeena iyo dadkeenuba ay ku tiirsanyihiin.
Shirka oo uu horey u daahfuray Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxaa gabagabadiisa goob joog ka ahaa Wasiirada Xanaanada xoolaha ee heer Federaal iyo heer maamul Goboleed, Xoolo dhaqato, Aqoonyahano, ganacsatada xoolaha iyo marti sharaf kale.
Wasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya Mudane Xuseen Maxamud Sheekh Xuseen oo shirka soo xiray ayaa sheegay in laga billaabo maanta ay u hawlgeli doonaan sidii macluumaadkii la ururiyey saddexda maalin ay ugu dari lahaayeen istaraatiijiyadda.
Mudane Xuseen Maxamud Sheekh XuseenWasiirka Xanaanada Xoolaha Soomaaliya ayaa dhinaca kale tilmaamay in qodabada muhiimka ah ee shirka kasoo baxay ay horgeyn doonaan Golaha Wasiiradda si ay u meel mariyaan, isla markaana ay u noqoto istaraatiijiyad dhameystiran.
Dib u dhis lagu sameeyay qaar ka mid ah Waddooyinka Gaalkacyo”
R/Wasaare Khayre Iyo Wasiirka Maaliyadda Norway oo ku kulmay Washington
Ciidamada Xoogga Dalka oo Gobalka Hiiraan ku laayay Maleeshiyad ka tirsan Al-shabaab.
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Washington uga qeyb galay shirka IMF iyo Bangiga Adduunka ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya+Sawirro